တိုက်ရဲ့ အစွန်းတစ်ဘက် မှာ ညီမလေး တစ်ယောက် အဝေးကြီးကို ငေးနေတယ် - APANNPYAY
Home / ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ / ဖြစ်ရပ်မှန် / တိုက်ရဲ့ အစွန်းတစ်ဘက် မှာ ညီမလေး တစ်ယောက် အဝေးကြီးကို ငေးနေတယ်
တိုက်ရဲ့ အစွန်းတစ်ဘက် မှာ ညီမလေး တစ်ယောက် အဝေးကြီးကို ငေးနေတယ်
Apann Pyay 8:00 PM ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ , ဖြစ်ရပ်မှန် Edit
ကွန်ကရစ်သား ထုထည်ကြီးတွေနဲ့ တောက်ပပြောင်လက် အဆောက်ဦကြီး တွေဟာ သူ့ကို မှီတွယ်မှု မပေးစွမ်းနိုင်ပြီ လင်းနေတဲ့ အမှောင် ထဲမှာ သူဟာ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ အနာဂတ်ကိုဖွေရှာရင်း ညီမလေး ဟာ မီးခြစ်ဆံလေးနဲ့တူတယ် ။ တစ်ချို့ရဲ့ တခဏတာအလင်းအတွက် ရှဲကနဲ တခြစ်ခတ်စာလေးအတွက် သူ့ဘဝတစ်ခုလုံး လောင်ကျွမ်းပေးလိုက်ရတာ။
ပျော်ရွင်မှု ဆိုတာ ဘာများလဲရှင် လောကထဲမှာ ရှိများရှိပါ့မလားလို့ သံသယကြီးစွာ သူမေးတယ်။ နှနယ်တဲ့နှလုံး သားေ လးဟာ ကြမ်းတမ်းခက်သရော်လွန်းတဲ့ လောကကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အားအင်မပြည့်စုံရှာ အဝေးကြီး ကို ငေးရင်း ရှာရင်း မျှော်လ င့်ချက်ဆိုတာ လိုက်လေဝေးရင်း ညီမလေး ကိုနှစ်သိမ့်ဖို့ လက်တစ်ဘက်မှ မရှိတော့အောင် ရှားပါးလွန်းတဲ့ဘဝ ညီမလေး မျက်ရည် တွေအတွက် မှီတွယ်ငိုကြွေးစရာ ပခုံးတစ်ဘက်မှ မရှိတော့တဲ့ လောက။
နွေးထွေးမှု ငတ်တယ် ယုံကြည်မှု ငတ်တယ် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ ညှာတာမှု ငတ်တယ်။ လူအဖြစ်နဲ့ အသက်ရှင်ရတာ မောတယ်။
မနက်ဖန်ခါဆိုတာ သေခြင်းတရားထက်တောင် ကြောက်စရာ ကောင်းသေးခဲ့ ည်ီလေး အတွက် …. အသက်ကိုပေး လိုက်ရတဲ့ အဆုံးစွန်နာကျင်မှုကို ရင်ဆိုင်ဝံ့ပေမယ့် မနက်ဖန်တွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ ညီမလေး ခမျာ ပိုခက်ခဲ့။
မျက်လုံး တွေ လက်ညှိုးတွေ ဖိနှိပ်ခြင်းတွေ ဥပေက္ခာတရားတွေ အောက်နှုတ်ခမ်းကိုက်ထားတဲ့ဒါဏ်ရာထက်
ရင်ဘတ်ထဲက နာကျင်မှုဟာ ပိုကဲတဲ့အခါ သူရှိနေတာ တိုက်တစ်ဘက်စွန်းမဟုတ်ပဲ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းရိပ်မြုံရဲ့ အစွန်ဘက်ဖြစ်ကြောင်း ညီမလေး သိသွားလိုက်တဲ့အခါ လူ့ဘဝကို ညီမလေးခေါင်းခါခဲ့တော့ရဲ့။
အဝေးဆုံးနဲ့ အရှိုင်းဆုံးဆီ ညီမလေး ခုန်ချလိုက်တယ်။ အမှောင်ဟာ ဝုန်းကနဲပြေးဝင်လာ မြေကြီးကလာသူဟာ မြေကြီးဆီပဲ ပြန်ခဲ့တယ်။ အမှောင်ထဲ ခုန်ချတဲ့ညီမလေးဟာ ကိုယ်တိုင် အမှောင် ထုတစ်ခုအဖြစ် ပျောက်ဆုံး သွားေ တာ့တယ်။
Thorn Nay Soe သွန်းနေ စိုး
Source : goo.gl/vwtIis
ကှနျကရဈသား ထုထညျကွီးတှနေဲ့ တောကျပပွောငျလကျ အဆောကျဦကွီး တှဟော သူ့ကို မှီတှယျမှု မပေးစှမျးနိုငျပွီ လငျးနတေဲ့ အမှောငျ ထဲမှာ သူဟာ ပြောကျဆုံးသှားတဲ့ အနာဂတျကိုဖှရှောရငျး ညီမလေး ဟာ မီးခွဈဆံလေးနဲ့တူတယျ ။ တဈခြို့ရဲ့ တခဏတာအလငျးအတှကျ ရှဲကနဲ တခွဈခတျစာလေးအတှကျ သူ့ဘဝတဈခုလုံး လောငျကြှမျးပေးလိုကျရတာ။
ပြျောရှငျမှု ဆိုတာ ဘာမြားလဲရှငျ လောကထဲမှာ ရှိမြားရှိပါ့မလားလို့ သံသယကွီးစှာ သူမေးတယျ။ နှနယျတဲ့နှလုံး သားေ လးဟာ ကွမျးတမျးခကျသရျောလှနျးတဲ့ လောကကို ရငျဆိုငျဖို့ အားအငျမပွညျ့စုံရှာ အဝေးကွီး ကို ငေးရငျး ရှာရငျး မြှျောလ ငျ့ခကျြဆိုတာ လိုကျလဝေေးရငျး ညီမလေး ကိုနှဈသိမျ့ဖို့ လကျတဈဘကျမှ မရှိတော့အောငျ ရှားပါးလှနျးတဲ့ဘဝ ညီမလေး မကျြရညျ တှအေတှကျ မှီတှယျငိုကွှေးစရာ ပခုံးတဈဘကျမှ မရှိတော့တဲ့ လောက။
နှေးထှေးမှု ငတျတယျ ယုံကွညျမှု ငတျတယျ ကိုယျခငျြးစာစိတျနဲ့ ညှာတာမှု ငတျတယျ။ လူအဖွဈနဲ့ အသကျရှငျရတာ မောတယျ။
မနကျဖနျခါဆိုတာ သခွေငျးတရားထကျတောငျ ကွောကျစရာ ကောငျးသေးခဲ့ ညျီလေး အတှကျ …. အသကျကိုပေး လိုကျရတဲ့ အဆုံးစှနျနာကငျြမှုကို ရငျဆိုငျဝံ့ပမေယျ့ မနကျဖနျတှကေို ရငျဆိုငျဖို့ ညီမလေး ခမြာ ပိုခကျခဲ့။
မကျြလုံး တှေ လကျညှိုးတှေ ဖိနှိပျခွငျးတှေ ဥပက်ေခာတရားတှေ အောကျနှုတျခမျးကိုကျထားတဲ့ဒါဏျရာထကျ
ရငျဘတျထဲက နာကငျြမှုဟာ ပိုကဲတဲ့အခါ သူရှိနတော တိုကျတဈဘကျစှနျးမဟုတျပဲ လူ့အသိုငျးအဝိုငျးရိပျမွုံရဲ့ အစှနျဘကျဖွဈကွောငျး ညီမလေး သိသှားလိုကျတဲ့အခါ လူ့ဘဝကို ညီမလေးခေါငျးခါခဲ့တော့ရဲ့။
အဝေးဆုံးနဲ့ အရှိုငျးဆုံးဆီ ညီမလေး ခုနျခလြိုကျတယျ။ အမှောငျဟာ ဝုနျးကနဲပွေးဝငျလာ မွကွေီးကလာသူဟာ မွကွေီးဆီပဲ ပွနျခဲ့တယျ။ အမှောငျထဲ ခုနျခတြဲ့ညီမလေးဟာ ကိုယျတိုငျ အမှောငျ ထုတဈခုအဖွဈ ပြောကျဆုံး သှားေ တာ့တယျ။
Thorn Nay Soe သှနျးနေ စိုး